पोखरामा खतराको घण्टी बजे कै हो ? पोखरामा एकै दिनमा ३१० जना संक्रमित – Gandaki News
पोखरामा खतराको घण्टी बजे कै हो ? पोखरामा एकै दिनमा ३१० जना संक्रमित
पोखरा, २१ बैशाख/ पछिल्लो २४ घण्टामा कास्कीमा ३ सय १० सहित गण्डकी प्रदेशमा थप ४ सय २९ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
९ सय ३ जनाको पिसिआर परिक्षण गर्दा थप ४ सय २९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ ।
नयाँ संक्रमित मध्ये पोखरा महानगरपालिकाका ३ सय १० जना रहेका छन् । नवलपुरमा ५१ जना, बाग्लुङका ३३ जना, तनहुँका १६ जना, लमजुङका ८ जना, स्याङजाका ५ जना, मुस्ताङका ४ जना, पर्वत र म्याग्दीका १, १ जना रहेका छन् । यो सँगै प्रदेशभर कुल कोरोना संक्रमिमतको संख्या १९ हजार ८ सय ५३ पुगेको छ ।
मगंलबार प्रदेशमा ६३ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् । हालसम्म प्रदेशभर संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या १७ हजार ७२ रहेको छ । हाल गण्डकीमा २५ सय ४६ जना कोरोनाका सक्रिय केस छन् ।
त्यस्तै २४ घण्टामा गण्डकीमा थप ३ जनाको मृत्यु भएको छ । मंगलबार मृत्यु हुनेमा कास्की, पर्वत र म्याग्दीका रहेका छन् । उनीहरु सबैको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
योसँगै प्रदेशभर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २ सय ३५ पुगेको छ । पोखरामा एकै दिन यती धेरै संख्यामा देखीको अहिले सम्म कै धेरै हो । यती धेरै देखी पछि पोखरामा खतराको घण्टी बजेकै हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।